Uyazikhandla ukuze kuhlomule isizwe
UNKSZ Makhosi Cebekhulu ongomunye wabahlomula ngesikhathi uhulumeni ubuyisela ipulazi likamoba, Ubizo eliseMpangeni, ungomunye wabaphathi baleli pulazi eliqashiselwe abakwaTongaat Hullet. Isithombe: Sithunyelwe
Phili Mjoli | October 1, 2020
OWESIFAZANE okunguyena kuphela kwabahlanu abaphethe ipulazi eliqashwe ngabakwaTongaat Hullet, uthi wayengakaze azibone ngelinye ilanga engumlimi ngoba wenza izifundo zokusebenza emkhunjini, maqede wangena emkhakheni wokwakha.
UNksz Makhosi Cebekhulu, omunye wabanikazi bepulazi elitshala umoba Ubizo eliseMpangeni, walithola ngohlelo lukahulumeni lokubuyiselwa komhlaba.
“Ngo-2016 uphiko lokubuyiselwa komhlaba kubanikazi bawo lwasibuyisela umhlaba ongamahektha alinganiselwa ku-2300. Bangu-2000 abanikazi bepulazi, kithina wayengekho onolwazi lokutshala olujulile olwaluzokwenza ipulazi lihlale lisesimeni salo. Sathatha isinqumo sokuthi kumele isivumelwano esikhona sokuthi abakwaTongaat Hullet bawulime lo mhlaba batshale umoba, siqhubeke kodwa ngesikhathi siqhubeka kumele sifunde kubona ukuthi kwenziwa njani.
“Ukufunda kwethu kumele kusukele ezingeni lokuphatha kuze kuyoshaya kwelomsebenzi ojwayelekile kungathi uma ipulazi selisezandleni zethu lingabe lisakhiqiza,” kusho uNksz Cebekhulu.
Le ntokazi ithi yangena ohlelweni lwabazofunda ngokuphatha ipulazi okuhambisana nokufunda ngomoba kube ngezokuphathwa kwebhizinisi lawo.
“Akuyona into elula ukufunda ngalo mkhakha kunezinto eziningi kanti namamaki abekiwe okumele uwathole ukuze udlulele esigabeni esilandelayo aphezulu kodwa ngikwazile ukufunda konke ngaphansi kwenhlangano, iSouth African Sugar Assossiation (SASA). Uma ungowesifazane kumele ufake umfutho othe xaxa kulokho okwenzayo ngoba usuke ubhekiwe ukuthi uzowenza nini amaphutha ngenxa yobulili bakho.
Ukufunda kwenza kube lula uma ubeka umbono kube khona ozoweseka ngakho kubonakale ukuthi okukhulumayo uyakwazi, akukhona ukuthi uyakhuluma nje emoyeni.”
Uthi ukuzinikela kwakhe kwenziwa wukuthi akafuni ukuthi umhlaba ababuyiselwe wona utholakale ungasasebenzi, nokuyinto ake ayibone yenzeka kwamanye amapulazi abuyiselwe kubantu.
“Kubalulekile ukuthi umhlaba obuyiselwe kithi sifunde ukuphathwa kwawo. Kungabi yithina kuphela abangabanikazi bepulazi abahlomulayo kodwa kuhlomule nesizwe sakwaCebekhulu ngemisebenzi.
“Ezolimo kuseyizona kuphela ezibonakala zikhulisa umnotho kuleli ngakho nathi kumele sifingqe imikhono sisebenze,” kusho uNksz Cebekhulu.